Ị nwere ike igosi m ụzọ ziri ezi iji nwetaghachi akwụkwọ backlinks PR10 maka n'efu?
Nke ahụ bụ ajụjụ kwesịrị ekwesị n'ihi na a nabatara na njikọ na ikike kachasị elu na ọnọdụ PageRank (dịka PR5 - PR10 backlinks) nwere ike inweta naanị kama ịzụta. Ee, n'ezie, e nwere ọtụtụ ihe dịgasị iche iche a hụrụ n'elu weebụ, yana njikọ dịgasị iche, na ọbụna PR10 backlinks nwere ike ịchọta ngwa ngwa na ire ere. Ka o sina dị, n'ime 99. 9% ikpe, "onyinye" ndị a abụghị ihe ọ bụla ma ọ bụ aghụghọ ndị scammers jiri mee ihe. Ịchọghị ebe nrụọrụ weebụ gị ma ọ bụ blog ị ga-enweta ụgwọ ọrụ dị oke ogo maka ịnweta ala azụ azụ azụ dị ala, ị na-eme? Cheta, ọ bụrụ na ịbịakwute njikọ na-arụ ọrụ nke ọma na SEO - àgwà na-adịkarị mkpa, ọ bụghị ọtụtụ. Ekwuru m na ịnweta akara azụ backlinks dị na PR10, dịka ọmụmaatụ site na ebe nrụọrụ weebụ na-agụ akwụkwọ na ndị gọọmentị ma ọ bụ ụfọdụ isi ihe ndị ọzọ a tụkwasịrị obi dị mma maka nzube SEO, kama ịmepụta ọtụtụ nke backlinks dị ala, na-enweghị nghọta doro anya maka isi ihe mgbaru ọsọ na ọrụ ha. Nke a bụ otu ị nwere ike isi nweta njikọ dị ike maka SEO, na ọbụna backlinks PR 10 - N'ezie, e nwere ọtụtụ ezigbo mma ịbịaru nso iji nyere gị aka. N'etiti ndị ọzọ, ana m akwado na ịnwale Testimonials, Nyocha, Nnyefe, Akwụkwọ Ozi, na Infographics. Mana ihe bụ na e nwere ike ijide backlinks PR10 ma ọ bụ site n'aka ndị gọọmentị, ma ọ bụ na ndị nkụzi. N'afọ a, enweela m ihe ịga nke ọma iji nweta ụfọdụ njikọ bara uru karịsịa site na ndị ikpeazụ - ma ị nwekwara ike ịnwa ịnweta postlinks PR8-PR10 site na ebe EDU weebụsaịtị - ma ọ bụrụ na ị na-emepụta ihe, ma ọ bụ na-eji scholarships.
N'ikpeazụ, ọ bụla ụlọ akwụkwọ gọọmentị, ọ bụghị nanị na mahadum na kọleji, ọ bụghị nanị na-agba ọsọ na ebe nrụọrụ weebụ gọọmenti, mana ọ dị iche ibe akwukwo ndi nwere otutu njikọ na ichota na ihe ndi ozo nyere nye mmadu nile - umu akwukwo, na ndi nkuzi ha. Ọ bụ ya mere ịrụ ọrụ iji nọgide na-achọpụta na itinye aka na ibe ndị a maka amaokwu n'ọdịnihu nwere ike ịghọ ụzọ dị ukwuu iji nweta ma eleghị anya backlinks kasị dị oké ọnụ ahịa na-akwụghị dollar, ọ dịkarịa ala kpọmkwem. Enwere m ike ịkwado ịmepụta ọhaneze site na email iji nye ụfọdụ ngwọta na-enye aka maka ụlọ ọrụ gị, dịka ọmụmaatụ, imewe weebụ, nchọpụta akpaaka, wdg.Na n'ezie, ị ga-adị ka spam. Ka o sina dị, ịnweta ọbụna 5-10% nke nzaghachi dị mma iji bipụ njikọ gị na-eme ka usoro a ghọọ ezi uche, ziri ezi?
Atụmatụ a ga-achọ ọ bụghị naanị oge na mgbalị gị kama ụfọdụ ego eji emefu ego. Ọ na-agụnye ịmepụta na ịkwalite ọmụmụ ihe iji nweta akara azụ azụ EDU ahụ kwesịrị ekwesị na nloghachi. Ọ bụrụ na ị dị njikere ịrụ ọrụ na agụmakwụkwọ dị ezigbo mkpa, ebe a bụ ihe atọ dị mkpa ị ga-eji rụọ ọrụ ahụ:
Wetaa peeji iji nye nkọwa zuru ezu banyere agụmakwụkwọ n'onwe ya, nyekwa ya -ajuju akwukwo iji tinye ndi ozo kwesiri ekwenye.
Chọpụta ndị ga-abụ mahadum ma ọ bụ kọleji na-eji akara ọchụchọ dị elu na "agụmakwụkwọ" dịka isiokwu bụ isi.
Mezue ọpụpụ na ozi email - ma nweere onwe gị ịgbapụ ma malite ịrụ ọrụ ịmepụta ezi akwụkwọ na ezigbo ndị mmeri na ụgwọ ọrụ Source .